Burmese taste - Iora: January 2011
ဒီရက်တွေအတွင်းချက်စား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟင်းအချို့ 
၀ါးတားတားဟင်းချို သို့ မဟုတ် ချဉ်ပေါင်ဟင်းချို.....
မုန်ညင်းဖူး၊ မှုို နဲ့ုငြုတ်သီးရောကြော်....
ကျန်ဖြတ်နေ့ ... ၀က်နံရုိုး၊ ၀က်အူချောင်းရောသမမွှေ...
Mackerel fish ငါးဟင်းဆီလည်ရေလည်...
Posted by Iora at 8:28 PM2comments: Links to this post
မြန်မာပီပီ မြန်မာ့သဘာ၀၀န်းကျင် အကြောင်းနားထောင်ရ၊ လေ့လာရ၊ သင်ယုရ၊ ဆွေးနွေးဖလှယ်ရတာ အလွန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။ ကျမ တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့ ၊ တနင်္သာရီတိုင်းတို့လို ရခုိုင်ပြည်နယ်တို့ လို ပင်လယ်ကမ်းရုိုးတန်းကနေ ရေခဲတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ ဟိမ၀န္တာတောင်စွယ်တန်းတွေထိ ဂေဟစနစ်တွေ ထူးထူးခြားခြား ရှိနေလို့ လည်း အပင်မျိုးစိပ်တွေ၊ သတ္တ၀ါမျိုးစိပ်တွေ စုံလင်လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုတွေ ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းလောက်အောင်၊ ဒါတွေ ဒီလိုရှိကြပါတယ်လို့ စနစ်တကျ သိပံ္ဗနည်းကျမှတ်တမ်းတင်ထားတာကတော့၊ နိုင်ငံခြားဘာသာနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေက လေ့လာမှတ်တမ်းပြုစုထားကြတာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာဘာသာနဲ့ မရှိသလောက်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဝမ်းနဲစရာတစ်ခုပါ၊ The Birds of Burma ဆိုတဲ့စာအုပ် ဟာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး B. E Smythies က ၁၉၄၀ လောက်မှာရေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူ့ ထက်ပြည့်စုံတဲ့ စာအုပ်ကို မထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ သုက သစ်တောဝန်ထောက် အဖြစ်နဲ့ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၀ နှစ်များပိုင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့၊ မြန်မာ့သဘာဝအပင်နဲ့သားငှက်တိရစ္ဆာန် (wildlife) တွေကုို လေ့လာမှတ်တမ်းတင်မှုများ ကုို အနည်းငယ်မျှသောမြန်မာပညာရှင်များ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ နဲ့သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေး သမားများက ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်တာတွေ ရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်စာတမ်းအကိုးအကားတွေ ကပြည်တွင်းမှာ အရမ်းရှားတယ်။ မြန်မာလိုရော၊ ဘိုလိုရော။ လေ့လာမှုအထောက်အကူပြု ကိရိယာ တွေကလည်း ပြည်တွင်းမှာ မရနိုင်တာတို့ ၊ ရှားတာတို့ ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ပကိုမှာနိုင်ပြန်ရင်လည်း ဈေးကြီးတာတွေရယ်ကြောင့်၊ လေ့လာသုတေသန လုပ်လိုသူများ အတွက် အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ ပြည်ပမှာ internet ကိုအချိန်မရွေး သုံးနေနုိုင်တဲ့ သူများက ပြည်တွင်းက လေ့လာလိုသူများ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာ အလွန်ကိုတန်ဘိုးရှိပါတယ်။
Hill Forest - photo: Iora
မြန်မာ့သစ်တောများကို အခြေခံအားဖြင့် ၈ မျိုးခန့် ခွဲခြားထားပါတယ်။ ၁) ဒီရေရောက်တော Tidal Forest ၂) သဲသောင်ပြင်ခုံတော Beach and dune Forest ၃) ရွက်ပြတ် ရောနှောတော Mixed Deciduous Forest ၄) အင်တိုင်းတော Indaing or Deciduous dipterocarp Forest ၅) အမြဲစိမ်းတော Evergreen Forest ၆) တောခြောက် Dry Forest ၇) တောင်ပေါ်တော Hill Forest နဲ့၈) ရွှံ့ နွံတော Swamp Forest များဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုအသေးစိပ် ထပ်ခွဲခြားထား ပါသေးတယ်။ ဒီလုိုသစ်တောအမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားတာနဲ့ အမျှ သူတို့ ကို မှီခိုနေထိုင်ကျက်စားတဲ့ သားငှက်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိပ်များလည်း ကွဲပြားစုံလင်လာပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ သဘာ၀၀န်းကျင် နဲ့ သားငှက်များကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထိန်းသိမ်းနေကြပါတယ်။ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ သဘာ၀၀န်းကျင် နဲ့ သားငှက်များ ကုိုလည်း သဘာဝချိန်ခွင်လျှာ nature balance ညီမျှစေဘို့ သာမက အမျိုးသားအမွေအနှစ် အနေနဲ့ဂုဏ်ယူထိန်းသိမ်းသွား ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Iora at 11:52 PM2comments: Links to this post
One of my favorite things is going to the farmers market and buying the Asian vegetables something like Chinbaung, Pumpkin leave, Gourd leave, Burmese Basil (I name it by myself), Small egg plant, Bitter Melon leave, Bitter Melon (Burmese type) etc.. My husband always reminds me not to buy so much because I can't eat them all myself and he is notavege guy and he prefers meat. So I am the only one who is 100% responsible to finish them up.
The vegetables I bought from the farmer's market
Posted by Iora at 4:42 PM No comments: Links to this post
ခရမ်းချဉ်သီးချက် နဲ့တို့ စရာ ရယ် ငါးကြော် (ready made)ရယ်
အကြိုက်ဆုံးဟင်းထဲမှာသူလဲပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊ ငြုတ်သီး ထောင်း (တကယ်တော့သေးသေးလေးလှီးထားတာပါ) ၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ၊ ဆား၊ ခရမ်းချဉ်သီး ပါးပါးစိပ် ထားတာတွေအားလုံးကို ဆီထဲ့ပြီး လုံးလိုက်ပါတယ်။ (အချိန်မပေးနုိုင်လို့ ရယ်သိပ်လဲမထူးဘူးထင်လို့ ဆီမသပ်တော့ပါဘူး)ခရမ်းချဉ်သီးကြေတဲ့ထိ၊ ရေလိုရင်ရေနဲနဲချင်းထဲ့ပြီးချေပေးပြီးကြာကြာလေးတော့တယ်ရပါတယ်။ ငံပြာရည် နဲနဲကဲထဲ့ပါတယ် တို့ စားလို့ကောင်းအောင်။ ဆီလျှော့ထဲ့ထားပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးဗူးနဲ့ ချက်ရင်တော့ super fast ပေါ့။ ဗူးတွေပေါတဲ့အရပ်မို့ fresh ပဲဖြစ်နုိုင်ရင်စားချင်ပါတယ်။ ဆီပြန်ပြန်လေးကြိုက်ရင်ဆီများထဲ့နိုင်ပါတယ်။ဟင်းချက်တာကတော့ အချိန်ရယ်၊ mood ရယ် အပေါ် မူတည်ပြီးကောင်းတစ်လှဲ့ မကောင်းတစ်လှဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်ရပေမဲ့mood ကမကောင်းရင်တော့၊ (အဟင်း) တာ့တာ ပေါ့၊ အင်္ဂလိပ်ကြောင်အိမ်ထဲမှာ သိမ်းရတာ အဆင်ပြေအောင် container ထဲဘဲထဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။
Posted by Iora at 8:19 PM No comments: Links to this post
ခရမ်းချဉ်သီးချက် နဲ့တို့ စရာ ရယ် ငါးကြော် (read...